Vokatr’i Enawo tao Analanjirofo sy Atsinanana : olona 24 namoy ny ainy, anarivony ny traboina | NewsMada
Vokatr’i Enawo tao Analanjirofo sy Atsinanana : olona 24 namoy ny ainy, anarivony ny traboina
Ankoatra ny trozonabe iray maty natsipin’ny ranomasina, 24 no namoy ny ainy, anarivony ireo traboina, tany amin’ny faritra Analanjirofo sy Antsinanana, vokatry ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo.
Ho an’ny faritra Atsinanana manokana, nahatratra 22 ny namoy ny ainy tamin’ny fandalovan’ny rivomahery Enawo iny. Tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ifasina distrikan’ i Vatomandry, nahatratra 16 ny maty tototry ny tany sy lasan’ny rano ny andron’ny 8 marsa. Ao Mahanoro, olona iray mbola karohina lasan’ny reniranon’ i Sakanila, roa kosa tao Marolambo ny 7 sy 8 marsa teo vokatry ny fiakaran’ny rano sy tototry ny tany. Mbola karohina ny iray lasan’ny rano hatramin’izao.
Olona telo namoy ny ainy tao Brickaville, nirodanan’ny trano sy difotry ny rano ary nipoahan’ny tafo fanitso araka ny vaovao nomen’ny Centre régional des operations d’urgence (Crou) Atsinanana, ao amin’ny lapan’ny Faritra Atsinanana. Voalaza fa manodidina ny 7 000 ny olona tsy manan-kialofana eo anivon’ny faritra Atsinanana, ka 250 eto an-tampon-tanànan’ i Toamasina. Trano tsy latsaky ny 500 ravan’ny rano be sy narodan’ny rivotra. Misy fahatapahana ny lalam-pirenena faha-2 sy faha-11 A mampitohy an’Antsapanana hatrany Mahanoro sy Marolambo. Fotodrafitrasam-panjakana toy ny sekoly biraon’ny kaominina izay lasa ny tafo, toy ny tao Brickaville. Ao Vohitranivona, trano 300 difotry ny rano ary namela traboina 3 000.
Namono trozona lehibe iray
Ho an’ny faritra Analanjirofo, ankizy roa maty lasan’ny rano sy tototry ny trano rava tao Maroantsetra. Ankoatra izay, trozona lehibe iray kosa nafefiky ny ranomasina tao amin’ny tora-pasik i Fenoarivo Atsinanana ny alakamisy teo izay nahafaly ny fokonolona fa nahazo sakafo be. Ilaina atao fanafody amin’ny fitsaboana ihany koa ny trozona. Niezaka nisakana ny olona tsy haka ny henan’ ity trondro lehibe ity ny solontenam-panjakana ao an-toerana, saingy tsy nisy nihaino izy ireo. Nametrahana mpitandro ny filaminana niambina ilay trozona ary nalevina avy eo.”Hena tahaka ny biby anaty ranomasina rehetra io ka tokony hatao sakafo satria fanomezan’ Andriamanitra”, hoy ny fokonolona ao an-toerana.
Nanafim-baovao ny matérnité
Tetsy amin’ny sampana vonjy taitran’ny Hopitalibe, Toamasina, nahatratra dimy ny olona nandalo fizahana noho ny ratra nahazo azy vokatry ny fanitso sy ny fianjeran’ny hazo, nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Enawo. Tao amin’ny sampana fampiterahana, teny avona no setrin’ny fikaroham-baovao raha nanontany ny isan’ny zaza teraka nandritra ny fandalovan’ny rivodoza ny mpanao gazety. « Mitsikera ny fakan’ ireo rasazy vola amin’ny bevohoka sy ny vehivavy hiteraka indrindra ireo tsy maintsy hodidina fotsiny ianareo mpanao gazety », hoy ny valin-teny azo.
Nilaza ny renim-pianakaviana iray manaraka bevohoka fa ahafahan’ ireo mpampivelona maka vola amin’ny mpanaraka mpiteraka, lazaina fa mila fandidiana hatrany ilay bevohoka na tokony hiandry fotoana ara-dalàna aza. Nanamafy izy fa zaza roa maty tao an-kibo fa avotra kosa ny reniny tao amin’ny hopitaly.